Kies shaki la'aan waa barnaamij software in wax faaiido ah oo ay soo gelin abbaaro waa in aan marnaba la rakibay wanaag qalabka sida iyo sidoo kale nidaamka kombiyuutarka ah. Barnaamijkan wuxuu ka dhigaa ma aha oo kaliya maamulka qalabka adag tahay laakiin waxa ay sidoo kale la hubiyo in user helo arrimaha markii Kies ee lagu rakibay gal kombiyuutarka. Labada OS weyn ee jeer oo dhan sida Mac iyo Windows 8 oo dhan qoraalkii dambe uma lihin barnaamijka sida software Tani waxay abuurtaa cayayaanka iyo in la hubiyo in jadwalka la musuq maasuqay.
Marka ay timaado in Mac OS markaas arrinta ugu weyn ee ay tahay in Kies waa inuu xaqiijiyo in iDevice waxaa marnaba u hagaagsan adeegga iSync ah. User ayaa soo ma awoodi doonaan in ay maareeyaan macruufka ah warbaahinta oo ku lifaaqaya qalabka kombiyuutarka. Kies ayaa ku Mac sidoo kale abuuri arrin halis ah sida ay u shilalka iyo ma ogaan qalabka fudayd iyo qanacsanaanta isticmaalaha. Mararka qaarkood waxa ay sidoo kale u ogolaataa user ay u helaan farriimaha la garanayn baadi labada daaqadaha iyo Mac iyo sida sida fariin qalad uu xiran yahay barnaamijka ayaa sidoo kale xiray in ay u gaar ah ugu dhaqsaha badan.
Marka taa loo eego dhammaan arrimahan waxaa lagula talinayaa in ay hubiyaan in barnaamijka ma mudan tahay siinta shot a iyo user xaqa u baahan yahay si loo hubiyo in ugu fiican waxaa lagu bixiyaa arrintan la xiriira soo degsado kale si ay u buggy iyo barnaamijka laggy oo laga heli karo si fudud internet-ka. Mar kale sida ayaa sidoo kale waxaa lagu sharaxi doonaa in qodobkan danbe oo la hubiyo in user helo natiijada ugu wanaagsan oo shaki la'aan waxaa loo arki karaa mid ah oo dhan ugu fiican kale oo ka dhigi lahaa.
Waayo, hadda ka hooseeya waa faahfaahinta ugu sareysa 5 dib u eegista 4 ka mid ah kuwaas oo aad u xun oo isticmaala dadka kale ee ay joojiyaan isticmaalka barnaamijkan:
Dib u lahayn. 1:
Mawduuca: dib u eegista Samsung Kies
Dhammaan qiimaha ku saabsan barnaamijka waxaa lagu qiimeeyay waa out of total ee 5 iyo inuu qiimeeyo sida soo socota:
fududaato in la isticmaalo: 4
rating Final: 4
Rating kama dambaysta ah ee alaabta muujinaysa in isticmaalka barnaamijka ku dhawaad ​​zilch yahay oo ay u sabab tahay qiimaha in qoraaga dib u eegista ayaa soo gabagabeeyey in barnaamijka waa in aan marnaba loo isticmaali by users halis ah oo dadka isticmaala ku raadiyaan kale ah waa in. Kies waa freeware ah iyo qoraa arrintan la xiriira ayaa sheegay in noocan oo kale ah ee barnaamijka waa mid aad u qaali ah xataa waxaa la siiyaa lacag la'aan ah ay sabab u tahay xaqiiqada ah in cayayaanka iyo arrinta waa la abuuro iyadoo la adeegsanayo barnaamijka oo waa inaanu ahaan rakibay kalifto. In kastoo dadka isticmaala qaar ka mid ah waxay ku andacoodaan in Kies waa kaydinta xogta shaqayn karta iyo utility kala iibsiga, laakiin waxa ay taasi la hubiyo in cayayaanka ee nidaamka loo abuuray oo waa mid ka mid ah arimaha ay tahay in wax laga qabto sida ugu dhakhsaha badan oo ay tahay barnaamijkan taas oo ka dhigaysa hubiyo in in arrinta loo abuuray. Arrinta gunteedu waa in barnaamijka uu yahay mid aad u khaldan u badan oo ka shaqeeya wanaagsan in xaaladaha haboon oo keliya taas oo aan marnaba suurto gal marka ay yimaadaan si ay celcelis ahaan user computer.
Dib u lahayn. 2
Mawduuca: Dib u Samsung Kies iyo Kies 3
Author: iibsiga telefoonka Mobile
Dib u eegista Tani waxay sidoo kale waa heer sare xun marka ay timaado Kies iyo Kies 3. shaqo gaabis Barnaamijku wuxuu software waa wax ayaa haatan lagu eedeynayaa in arrintan la xiriira iyo sabab la mid ah user ma noqon doonto mid ay awoodaan oo keliya in ay isticmaalaan barnaamijka hab yahay madax xanuun, laakiin waxa ay sidoo kale waxay qaadan doontaa waqti aad u dheer si loo hubiyo in xogta la wareejiyo. Taageerada multimedia ee Kies waa weyn yahay oo waa la sheegay in ay Samsung laakiin ay illoobin in la xuso in files .avi aan la aqoonsan barnaamijka oo halkan files, kuwaas oo aan loo gudbin karaa nidaamka haddii Kies waxaa loo isticmaalay sidii dhexdhexaad ah. Guud ahaan offs cut in OS Mac sidoo kale waa mid ka mid ah cayayaanka aan lagu go'an. By akhriska dib u eegista waxa ay u muuqataa in barnaamijka uu u baahan yahay dib-u- horumarinta halkii qamaar cayayaanka kaliya.
Dib u lahayn. 3
Mawduuca: Samsung Kies dib u Softnic
User waa mid aad u cadhaysan oo ku saabsan isticmaalka barnaamijka software-ka. User ayaa sidoo kale xusay in user ee barnaamijka waa laga cabsado oo sabab la mid ah ayaa soo jeedinaya in dadka kale si ay u dhaqso badan uninstall. User ayaa sidoo kale sheegay in feature playlist waa weyn yahay, laakiin waxaa la sheegay in hab u dhawyihiin. Software xitaa ma awoodaan in ay faylka wareejiyo ka meel kale iyo si loo soo dajiyo gabal sida cidlada ah buuxda oo mar.
Dib u lahayn. 4
Mawduuca: Kies 3 dib u CNET
User ayaa sheegay in wax soo saarka ee ay leedahay ma jirto faa'iidada ugu dhan iyo marka ay timaado khasaaraha ka dibna waxaa ka buuxsamay cayayaanka iyo dambaysaa in aan marnaba la hagaajin karin. Waxaa inkastoo shaqeeya waqti gaaban ka dibna kharribanta xiriirrada Muuqaalka by iyaga duplicating. Taageero macaamiisha Samsung ayaa arrintan la xiriira waa wax ay sidoo kale waa mid dhib ku ah, weligoodna ma taageeri macaamiisha marka ay timaado cayayaanka Kies. Barnaamijka waxaa lagu yaqaan telefoonka jeestay galay qarow.
Dib u lahayn. 5
Mawduuca: Samsung Kies Editor ee Review
Author: jilicsan 32 tifaftirayaasha
User ayaa ku xusan qaar ka mid ah faa'iidooyinka ka mid ah barnaamijka iyo waxa ay u muuqataa in qoraaga waa in ay qaar ka mid ah kordhiyo ku qanacsanayn isticmaalka barnaamijka. Dhinaca kale waxa uu sidoo kale lagu sheegay in barnaamijka weli waa buggy iyo laggy. Nooca cusub ee arrintan ayaa sidoo kale kala hadlay barnaamijka iyo waxa ku lulataa oo abuuraa dhib u user. Version ayaa beta ee barnaamijka waa wax ayaa sidoo kale aan la cayiman.
Wondershare Mobilego waa barnaamij waa sanduuqa dhamaystiran qalab loogu talagalay dadka isticmaala kuwaas oo isku dayaya in ay helaan kale si ay Samsung Kies. Waxay ka dhigaysa hubiyo in ugu fiican ayaa la siiyaa si user ah in arrintan la xiriira oo ay sidoo kale ay awoodaan si ay u ilaaliyaan telefoonka mobile hab ay doonayaan. Waayo, dadka isticmaala telefoonka android waxa aad u muhiim ah in la ogaado in barnaamijkan badbaadiyay ma aha oo kaliya laakiin sidoo kale wuxuu hubiyaa in kala iibsiga ee xogta la sameeyo in yaalla. Laga soo bilaabo Chine in ay music oo ka SMS inay xiriir wax kasta oo loo wareejin doonaa in yaalla. Mid ka mid Dambeyntii alaabta karaa si fudud ku talinaynaa sida kale ah oo aad u nabdoon oo ay ku Samsung Kies.
Hoos waxaa ku qoran qaar ka mid ah muuqaalada socodyada ka mid ah in is illowsiin kartaa:
• Maaraynta Media
• Maaraynta Mobile daruuriga
• hawlaha Advance gundhig
• ayna Mobile
> Resource > Samsung > Samsung Kies Review - waa wax xun Waxaa?